Famerenam-bola amin'ny Android: Inona avy ireo ary firy ny findainao | Androidsis
Kitapom-batana: Inona avy ireo ary firy ny findainao Android?
Ny bateria dia zavatra mampatahotra ny mpampiasa amin'ny Android hatrany. Noho izany dia mitady safidy hanatsarana ny fampiasana azy izahay, toy ny fanatsarana azo alaina amin'ny telefaona Huawei. Lafiny iray hafa izay tena ilaina dia ny toetran'ny bateria, satria te hahafantatra isika raha mijaly amin'ny olana iray, zavatra izay tsy maintsy horesahintsika haingana araka izay azo atao mba hisorohana ny fahasimbana na olana mandritra ny fotoana maharitra.
Lafin-javatra iray afaka manampy antsika amin'io lafiny io amin'ny Android ny dingan'ny famandrihana. Misaotra azy ireo isika afaka mahafantatra bebe kokoa momba ny batterie sy ny satan'izy ireo na ny faharetan'ny fotoana ahafahantsika mampiasa azy io amin'ny fahaizany feno. Fampahalalana iray izay zava-dehibe amin'ny mpampiasa.
1 Inona ny atao hoe cycle cycle
2 Ahoana no ahafantaranao hoe ohatrinona ny kitapony fiampangana ananantsika amin'ny Android
Inona ny atao hoe cycle cycle
Azontsika atao ny mamantatra avy amin'ny anarany, ny famerenam-bidy dia dingana iray izay ahitana ny solo-batana isaky ny finday Android fenoina tanteraka ary alaina. Na dia mety samy hafa kely aza io famaritana io miankina amin'ny mpanamboatra azy. Satria ny marika sasany dia mihevitra fa tsy tsingerina raha tsy efa nampiasaina ny fahaizan'ny bateria voalaza. Na dia tsy voatery ho ao anatin'ny vanim-potoana mitovy foana aza izany mandra-pamoahana azy indray.
Amin'izao fotoana izao, rehefa dinihina fa ny bateria mahazatra indrindra dia ny bateria lithium ion, ny famerenana amin'ny laoniny dia tena zava-dehibe. Mbola zava-dehibe kokoa noho ny fotoana lasa izay nanamboarana azy. Satria mety hitranga fa ny bateria izay manana habetsaky ny kitapom-bola betsaka kokoa dia miharatsy kokoa noho ny batterie taloha, saingy nihoatra ny tsingerina nilalaovany tamin'ny fiainany mahasoa.
Raha ny telefaona finday Android ankehitriny dia tombanana fa afaka ny batterie omeo fahombiazana tsara indrindra ho an'ny tsingerin-karama 400. Ka io no tarehimarika tokony hananantsika ho toy izany referansa izany. Mazava ho azy fa hiovaova arakaraka ny telefaona. Saingy tsara ny manana sanda referansy antonony amin'izany.
Maninona ny telefaona Android no mampiasa batterie betsaka rehefa tsy miasa
Ahoana no ahafantaranao hoe ohatrinona ny kitapony fiampangana ananantsika amin'ny Android
Ao amin'ny Android dia tsy manana fiasa zanatany izay milaza amintsika ny tsingerin'ny finday izahay. Mampalahelo fa tsy azo atao izany, ary toa tsy hampiasa io asa io amin'ny ho avy i Google. Mba hanaovana izany dia mila mampiasa fampiharana sasany isika. Ao amin'ny Google Play dia mahita safidy vitsivitsy amin'ity lafiny ity isika, izay mamela antsika hanana fifehezana ny familiana finday tsy misy olana.
Angamba iray amin'ireo tsara indrindra ny Charge Cycle Battery Status. Izy io dia rindranasa azontsika sintonina maimaimpoana amin'ny Android. Misaotra an'io fa afaka mandrefy ny tsingerin'ny famandrihana ananan'ny telefaona isika. Amin'ny fotoana manaraka handefasantsika ny telefaona finday, ary tanterahina ny boriborintany iray feno dia hisy ny famantarana aseho eo amin'ny efijery an-trano. Ho fanampin'izany, ny fampiharana dia mampiseho koa ny sary izay anombanana ny isan'ireo tsingerin'ny bateria sisa tavela. Manome statistika hafa anay ihany koa izy ireo, izay mety mahaliana sy mahasoa ny mpampiasa. Mba hahafahan'izy ireo manara-maso ny toe-pahasalaman'ilay bateria voalaza. Azonao atao ny misintona ny fampiharana amin'ity rohy ity:
Andoavam-batana tsingerin'ny bateria
Developer: Fampandrosoana Cerebrum
Izy io dia fampiharana tena ilaina, na dia misy fetra lehibe aza. Satria ny rindrambaiko dia tsy afaka mandrefy ny tsingerin'ny fiampangana fotsiny hatramin'ny fotoana nametrahantsika azy tamin'ny finday Android. Ankoatr'izay, rehefa mampifandray ny telefaona amin'ny charger isika dia tsy maintsy alefa amin'ny fotoana rehetra fa raha tsy izany dia tsy ho azo atao ny mirakitra izany tsingerina izany. Ka raha manana telefaona vaovao ianao dia mety mahaliana ny mametraka azy hatramin'ny voalohany, toy ny fampiharana hafa. Saingy io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra azontsika ampiasana amin'ity sehatra ity, amin'ny fiheverana ireo fetra misy ao amin'ny rafitra fiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » bateria » Kitapom-batana: Inona avy ireo ary firy ny findainao Android?
Ny Facebook dia hamela ny mpampiasa hanajanona ny fampandrenesana
Ny orinasam-panjakana amerikana sasany dia nanohy namerina nametraka singa ho an'ny Huawei